[झटारो] शेर–ए–संवाद - व्यंग्य - प्रकाशितः असार २७, २०७४ - नेपाल
यस्ता सटीक, स्पष्ट, पारदर्शी, आँटी र बौद्धिक प्रधानमन्त्री पाउनु हामी नेपालीहरूको अहोभाग्य हो । कुरै नबुझी आलोचना गरेर आफ्नै कद नघटाउँ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको एउटा अन्तर्वार्ता नामको वादविवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएका जवाफ र उनको हाउभाउका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी तत्त्वहरूले अनेक टीकाटिप्पणी र विरोध गरे । वास्तवमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूको निष्कपटता, निश्छलता, अबोधपना र भद्रता नबुझ्नेहरूले उनको आलोचना गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले त्यो कार्यक्रममा पटक्कै ढाँटेका छैनन् ।
‘थाहा छैन’, ‘बुझौँला’, ‘सोधौँला’, ‘कुरा गरौँला’, ‘चुप लाग’, ‘बढ्ता नबोल’ आदि अभिव्यक्तिले उनी ढाँट्न जान्दैनन् भन्ने प्रमाणितै गरेको छ । उदाहरणका लागि केही नमुना संवाद हेरौँ :
प्रश्न : सुशीला कार्कीलाई किन महाभियोग लगाएको ?
उत्तर : फिर्ता भइसक्यो । सक्कियो । किनको जवाफ खोज्ने तपाईं को ?
प्रश्न : फिर्ताचाहिँ किन लिएको त ?
उत्तर : कुरा मिल्यो, सक्कियो ।
प्रश्न : जनतालाई कारण थाहा पाउने अधिकार त छ नि ।
उत्तर : जबर्जस्ती नगर्नुस् ।
प्रश्न : महाभियोग लगाउने, फिर्ता लिने, यो त केटाकेटी खेलेजस्तो भएन र ?
उत्तर : को केटाकेटी ? हामी ६०–७० वर्ष नाघेकाहरूलाई केटाकेटी भन्ने ?
प्रश्न : हामी टेलिभिजन कार्यक्रमको सुटिङमा छौँ । संसारभरिका जनताले तपाईंलाई हेर्नेछन् । अलिक नरिसाईकन बोलिदिनुहोस् ।
उत्तर : संसारभरिका मान्छेले हेर्छन् भनेर मलाई मूर्ख बनाउन खोजेको ? अंग्रेज, चाइनिज, जापानिजहरूले नेपाली बुझ्छन् ?
प्रश्न : सार्वजनिक कार्यक्रममा झर्किंदा प्रधानमन्त्रीज्यूको उचाइ घट्ने हो कि भनेर... ।
उत्तर : मेरो उचाइ छ फिट हो । यो उमेरमा उचाइ घट्ने र बढ्ने हुन्छ ?
प्रश्न : प्रश्न एकातिर उत्तर अर्कैतिर गयो प्रधानमन्त्रीज्यू ।
उत्तर: मलाई यो यो प्रश्न आउँछ भनेर अगाडि नै जानकारी दिनु पर्दैन ? जवाफ नआउने प्रश्न सोध्ने अनि जवाफ आएन भन्ने ?
प्रश्न : दर्शकतिर हेरेर अलि उज्यालो अनुहारमा कुरा गरौँ न प्रधानमन्त्रीज्यू ।
उत्तर : के म त्यत्तिकै ङिच्चङिच्च गरौँ त ? मलाई नौटङ्की गर्न आउँदैन ।
प्रश्न : चार–चार पटक प्रधानमन्त्री.... ।
उत्तर : रिस गरेर हुन्छ ? आठपटक पनि हुन सक्छ । गिनिज बुकमा नाम लेखाएँ भने नेपालको गौरव नै बढ्छ ।
प्रश्न : चुनावमा जनतालाई दिएका आश्वासन कति समयमा पूरा गर्नुहुन्छ ? समय तोकेर भनिदिनुस् न ।
उत्तर : समय तोक्नलाई म ज्योतिषी हो र ?
प्रश्न : सरकारका आगामी मुख्य योजना के के छन्, बुँदागत रूपमा बताइदिनोस् न ।
उत्तर : बुँदागत रूपमा बताउन यो लोकसेवाको जाँच हो ?
प्रश्न : नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भारत जाने चलन छ, किन होला ?
उत्तर : हुनेबित्तिकै कहाँ गएँ ? यही प्रश्न उठ्छ भनेर चार महिनापछि जान खोज्दैछु ।
प्रश्न : नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तनले नेपाली जनता हैरान भइसके । नेपालमा स्थायी सरकार कहिले दिनुहुन्छ ?
उत्तर : ए, मैले पो स्थायी सरकार दिनुपर्ने ? भोट हाल्ने बेलामा एमालेलाई हाल्ने, मसँग स्थायी सरकार खोज्ने ?
प्रश्न : जनताले बहुमत दिएको संसद् तपाईंहरू आफैँले विघटन गरेको कुरा बिर्सनुभयो ?
उत्तर : तपाईं बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ ।
यसरी प्रश्नकर्ताहरूलाई इँटाको जवाफ ढुंगाले दिएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद अनुरूपको शक्ति प्रदर्शनमा उत्कृष्टता हासिल गरेका छन् । यस्ता सटीक, स्पष्ट, पारदर्शी, आँटी र बौद्धिक प्रधानमन्त्री पाउनु हामी नेपालीहरूको अहोभाग्य हो । कुरै नबुझी आलोचना गरेर आफ्नै कद नघटाउँ ।